UKUHLWA KWANGAPHAMBI KOMASH KWIDAVE | BUKELA IKLIPHU EKHETHEKILEYO - UKUHLEKISA
Bukela ikliphu ekhethekileyo evela kwiLate Night Mash njengothotho olutsha lwengxoxo kuDave
Iqela elinizisele Ingxelo kaMash liphinde lahlangana ukuze livuselele uthotho lweLate Night Mash, eqala ukubonwa kuDave ngokuhlwanje- kwaye sineklip ekhethekileyo evela kwisiqendu sokuqala.
Uphefumlelwe ngopapasho oluhlekisayo lweDaily Mash, umboniso ubonakalisa uburharha obusemxholweni malunga neendaba ezinkulu zeveki, kunye nokuhlekisa kwezinye iindawo zobomi bemihla ngemihla.
Kule kliphu evela kwisiqendu sangokuhlwa, umhlekisi kunye nomninimzi uEllie Taylor wazisa ingxelo malunga nekati ejika impumlo yayo ekutyeni okubonelelwe ngumniniyo, kodwa ithathe inzondelelo enkulu ngokufaka ulwimi lwayo ukuba lusebenze kwenye indawo.
Ungayibukela ikliphu engezantsi, ebonisa ukungahambi kakuhle (kodwa kumnandi). (Isilumkiso: ikliphu inolwimi lwabantu abadala.)
Ngokuhlwa ebusuku uMash waqala ubomi kwi-BBC ezimbini njengeNgxelo kaMash, eyayibaleka uthotho olunine ngaphambi kokuba irhoxiswe ekuqaleni kwalo nyaka kwaphoxa abalandeli.
Ngethamsanqa, isikhalo somboniso sokuba siqhubeke sithathe ingqalelo yejelo le-UKTV uDave, othathe umboniso webatch entsha yeziqendu phantsi kwesihloko esitsha.
Abafaki kufuneka bafumane umboniso ohambelana nokuzalwa kwabo kwangaphambili, njengoko iqela labadlali kunye nokubhala kubandakanya uNish Kumar, uEllie Taylor, kunye noRachel Parris babuyile ukuze baqhubeke nomsebenzi wabo wokukhanyisa iindaba zasebusuku.
Wonke umntu utsibe ithuba lokubuya, utshilo uKumar. Ndicinga ukuba oko kuthetha nokuba inzulu, uthando oluhlala luhleli kunye nentlonipho yobungcali sonke esinayo omnye komnye, okanye inyani yokuba sonke ngokusisiseko asinakusebenziseka.
Late Night Mash iya kuba neziqendu zokuqala ezisibhozo, ezihlala ixesha elipheleleyo ngeyure- kunye nokudityaniswa okungcono ngenxa yomoya oya ngasekupheleni konyaka.
Ethetha ngohlaziyo lomzuzu wokugqibela, uKumar wongeze: Malunga noFebruwari, [umvelisi] uChris Stott wanditsalela umnxeba wathi, 'UDave ebeqhakamshelane noZeppotron malunga nokwenza uMash kwakhona - ubungayilungela?' ndinayo nantoni na eyenye yokwenza, ndiye ndathi 'Ewe'.
Ewe ndizimisele kakhulu kulo mboniso. Ndonwabile. Kwakumnandi kakhulu xa besithi banokubuyisa umboniso ukuba ngaphandle kwesizathu esinye kuya kuba kuhle ukuphinda ubone wonke umntu kwakhona. Baninzi abantu endingakhange ndibabone kuba senze uthotho lokugqibela ezindlwini zethu.
Late Night Mash iqala ngokuhlwanje nge-10 ngokuhlwa kuDave. Ufuna enye into ukuba ubukele? Jonga isikhokelo sethu seTV.
ndingayibukela njani ichernobyl
umabonwakude wendebe yehlabathi yabasetyhini
ithini inombolo yengelosi engama-333
xa i-apile isiganeko esilandelayo
iqala nini indoda ehambayo
ubuyele ebomini wenzani miri